Ra'iisul Wasaare Ku xigeenka dalka oo la kulmay Boqorka dalka Jordan[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka dalka oo la kulmay Boqorka dalka Jordan[Sawirro]
JORDAN – Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ku sugan dalka Jordan ayaa kulan la qaatay boqorka dalkaasi, Boqor Cabdalla
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo boqorka dalka Jordan ayaa ka wada hadlay adkaynta xariirka labada dawladooda.
Boqor Cabdallaha Jodran ayaa bogaadiyay horumarka ballaaran iyo soo kabashada baaxadda leh ee Soomaaliya ay ku tillaabsanayso waxa uuna ballan qaaday in ay si dhaw ula shaqaynayaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa dhankiisa sheegay in Soomaaliya iyo Jordan ay lahaayeen waligood xariir soo jireen ah oo ku salaysan walaaltinimo iyo is-xitiraam, hadana ay muhiim tahay in la xoojiyo.
Mudane Mahdi ayaa sidoo kale la kulmay kaaliyaha xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka Bini’aadninimada iyo qaar kamid saraakiisha ciidanka dalka Jodran.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa Jordan u tegay ka qayb galka shir looga hadlayo dagaalka loogu jiro yaranta ficillada argagaxisada iyo fikirka xagjirka ah.